Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase - NuuralHudaa
Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii ajjeechaa narratti raawwachiisee jira” jechuun mana murtii Washington DC tokkotti Khaamisa dabre himannaa bane. Haaluma kanaan manni murtichaa Muhammad Bin Salmaan akka dhihaatuuf ajaja kan baase tahuun beekamee jira.
Sa’aad Al-Jabri yeroo ammaa baqatee Kaanaadaa keessa kan jiraatu yoo tahu, yeroo dhaabbata tika mootummaa Sa’uudii hogganaa turetti, dhabbiilee tikaa Ameerikaa waliin hariiroo cimaa nama qabu tahuu ibsame. Himannaa Muhammad Bin Salmaan irratti bane kana keessattis, hariiroon inni dhaabbilee tikaa Ameerikaa waliin qabaachaa ture kan xiyyeeffannoo keessa isa galche tahuu eere. Dabalataanis mootummaan Sa’uudii ilmaan Sa’aad Al-Jabri lama, mana jireenyaa isaanii magaalaa Riyaad keessatti argamu irraa ukkaamsee butuun iddoon geesse kan hin beekamne tahuu ibsame.
Manni murtii Ameerikaa ajaja yaamichaa kanaan Muhammad Bin Salmaan waliin qondaaltota biyyattii kanneen biroo 12 kan yaame tahuu gabaafame. Xalayaa yaamichaa kanaan Bin Salmaan fi namoonni yaamaman yoo kan hin dhihaanne tahe, iddoo isaan hin jirretti dhimmicha ilaaluu kan jalqabu tahuus akeekkachiise.
Itti aanaan Abbaa Alangaa Ameerikaa kan duraanii Bruce Fein dhimmicha irratti Aljazeeraaf yaada kenneen “Muhammad Bin Salmaan himannaan irratti baname akka irraa ka’uuf, gama Prezdaant Traamp fi ministeera haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompiyotiin yaalii godhaa jira” jedhe.
Asalamualhikuum wramatuulhaai ani gaasini qaabaa zaakaani oboleesaa keenaamuu hin dadaamaa oboleesaa kaaraa abaati yaatimaa adhaati
July 30, 2021 sa;aa 3:52 pm Update tahe
Salaata Iid al adahaa 1442 Magaaloota Itoophiyaa garagaraatti